ကို Android သူ့ဟာသူ flash မှဖြစ်စေမ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
ကို Android သူ့ဟာသူ flash မှဖြစ်စေမ?
ဒါဟာသင် device ကို flash သွားနေမယ်ဆိုရင် flash မှရကျိုးနပ်သည်ကဘာကိုတင်လျှင်သင်ချင်နှင့်စမ်းသပ်ဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, ယေဘုယျအားဖြင့်များစွာသော firmware ကိုလူတို့တွင်သင်တို့အဘို့အမကြိုက်ဘူး, အရှိဆုံးသင့်လျော်သောအဘို့ကိုကြည့်ဖို့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအရာတစ်ခုခုရှိပါကဒါပေမယ့်မှားသွားနှင့်သင်က၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အခြားဘာမှ restore ဖို့စက်ကိရိယာ reflash ဖို့လိုအပ်ပါတယ်, သင်လည်းအဘယ်သူမျှမကန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးရဲ့အမှုကိုပြုဘယ်တော့မှမပေးပါ။ ပြုပြင်ရေး telefonovquot;; ဒါဟာသေချာပေါက်ကြောင့်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်မည်သည့်အကြီးအစင်တာ, ပင်သေးငယ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေ, များသောအားဖြင့်တစ်ဦးလျှော့ Quote မဟုတ်ပါဘူး, ငါတို့ဤမျှလောက်များစွာသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ယူအပေါင်း2လအတွင်းအာမခံရှိပါတယ်အတွက်ရှိသည်။ ယူကရိန်းမှာ, မကြာသေးမီက 50 hryvnia ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။
Сначала о том, зачем вообще прошивать андроид. Пример. У меня моторолла дифай+. Телефон очень хороший, но давно снят с производства. Хотя моторолла и так никогда не спешила с обновлением прошивки для своих телефонов. Родная прошивка моего дифая — андроид 2.3. И сейчас старье, и тогда была не фонтан. Сейчас у меня этом телефоне стоит андроид 4.4.3. Самый новый. Много современных телефонов могут похвастаться такой прошивкой? И в телефоне железо хоть и старое, но работает прекрасно.
အခုတော့သူကချုပ် သာ. ကောင်း၏အဘယ်ကြောင့်တွေအကြောင်း။ ဒါကြောင့်သင်ပိုကောင်းသင့်ဖုန်းနှင့်ယင်း၏စွမ်းရည်ကိုငါသိ၏။ သင်ဤ firmware ကိုငြီးငွေ့ရလျှင်သင်ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာရှင်များမှတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ပိုက်ဆံပေးချေရန်မလာကြဘူး။ အပ်ဒိတ်များမကြာခဏတရားမဝင် firmware ကိုအဘို့အသွားပါ။ သငျသညျပိုက်ဆံတစ်ဦးချင်းစီအချိန်ပညာရှင်များပေးဆောင်ချင်ပါသလား?
Теперь о том, как поменять. Товарищ правильно писал о форуме 4pda. Идете на форум, находите ветку, где обсуждается ваш телефон. Внимательно читаете, разбираетесь в терминах. Если надо, на форуме товарищи с удовольствием вам подскажут порядок действий при прошивке. И все — у вас телефон с последней версией андроида. А сами вы почти профессионал в андроиде. По крайней мере в глазах окружающих. Теперь они с вами советоваться будут.
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုချုပ်ပါပြီ။4၌ငါ့ကိုအန်းဒရွိုက်။ ပေါ်မှာ4PDA nahodish ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အရာခပ်သိမ်းတွင် delaesh ။ အများဆုံး mozhesh တစ်အုတ်သို့လှည့်, ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ညွှန်ကြားချက် pomogut.Samoe အလင်း cwm မှတဆင့်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာ poluchaesh Root အခွင့်အရေး, ထို့နောက် stavish rekaveri cwm kachaesh ကြောင်းဆွဲယူတဲ့ file မှ rekaveri menu နဲ့ stavish အတွက်အစုရှယ်ယာ pamyati.Potom vhodish မှာ Archive နှင့် kidaesh မေးကြည့်ပါ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်ငါအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာအားလုံးအသုံးပြုသူရဲ့ PC ကိုအဆင့်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်, ကိုယ့် sews နှင့် android ဖုန်းများလွန်းပေမယ့်မရတိုင်း device ကိုသင်သည်သူတို့၏အစွမ်းအစ၌ယုံကြည်မှုမဟုတ်မှန်လျှင်, အဲဒါကိုလုံခြုံကစားရန် သာ. ကောင်း၏, ထိုကဲ့သို့သောနေတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုဆီးတားနိုင်သောကြောင့်ရိုးသားဖို့, ညာထိုသို့ပြုမှအစဉ်အမြဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ငါအမှတ်မမြင်နိုင်ကြဘူး။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျနော်ဖုန်းနှင့်အတူလုံးဝကျေနပ်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှအစီအစဉ်များငါ့ကိုနှောင့်အယှက်မပေးပါဘူး။ အလိုအလျောက်ဖုန်းပေါ်ရှိအာမခံပယ်စနစ်ပြောင်းလဲသူ။ လျှင်သူကဖြစ်နိုင်ခြေအလုပ်လုပ်အားလုံးမှတ်တိုင်များမှာအပေါငျးတို့သထိန်းသိမ်းရေးဖုန်းကိုအပြီးအကြောင်း, လုပ်ခဲ့တယ်ဘူး။
တကယ်အရမ်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကပညာရှင်များမှဖွင့်ဖို့ သာ. ကောင်း၏ရင်တောင်ဘာမှပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်။ ဟုတ်ကဲ့ကပိုက်ဆံပေးချေရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ အမှားအယွင်းများ၏လွတ်လပ်သောအလုပ်ပေါ်ပေါက်ပြီးနောက်လျှင်မူကား, ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပွနျလညျထူထောငျဘို့စနစ် ပို. ပင်ပေးဆပ်ရန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်သကဲ့သို့ကောင်းစွာ, ဒါမှမဟုတ်အရာရာကိုနှောင့်ရှက်ခြင်းနှင့်စွန့်ခွာဘူး။ ဒါမှမဟုတ်စနစ်သစ်နှင့်အတူသစ်တစ်ခုစမတ်ဖုန်းဝယ်ခြင်း။
Posted in, ကွန်ပျူတာများနှင့်အင်တာနက်
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,276 စက္ကန့်ကျော် Generate ။